Local Training – Myanmar Telecom Gateway
Myanmar Telecom Gateway
Basic Telecommunications [entry level]
Basic Mobile Technologies
Basic Transmission Technologies
Basci Electronic Communication and Digital Networks
Telecommunication ဆိုတာ Engineers တွေ အတွက်သာမဟုတ်ပဲ စိတ်ဝင်စားတဲ့မည်သူမဆို Career Jobs အနေနဲ့ရွေးချယ်လို့ရပါတယ်။ Telecom Field ထဲကို စတင်ဝင်ရောက် ချင်သော်လည်း Telecom Field နဲ့ ပတ်သတ်လို့ ဘာဆို ဘာမှမသိတဲ့ညီ /ညီမငယ်များအတွက် ဤအတန်းသည် Telecom Field သို့ဝင်ရောက်ရန်တံခါးပေါက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ထိုအတန်းတွင်နိုင်ငံတကာအတွေ့အကြုံရှိ ၀ါရင့် local/international ပညာရှင်များမှ သင်ကြားပို့ချသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။.
Level 1 Certificate in Telecommunication [Foundation level]
Power System and facilities
PSTN [Public Switch Telephone Network]
ဤအတန်းတွင် Telecom Field တွင် မသိမဖြစ် ဘာသာရပ် (6)မျိုးလုံးကို တစ်စုတစ်စည်းတည်း သင်ကြားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Telecom ပိုင်းကိုပြန်လည် လေ့လာချင်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်၊Telecom Fieldထဲ စတင်ဝင်ရောက် လိုသူများဖြစ်ဖြစ်၊Basic Telecommunication အတန်းပြီးလို့ Telecom Technical ပိုင်းကို ဆက်လက်လေ့လာချင်သူများဖြစ်ဖြစ် အားလုံးအတွက်အဆင်ြေ ပစေမယ့် စာတွေ့လက်တွေ့ သင်ကြားပေးနေသော Telecom အတန်းဖြစ်သည်။ Telecommunications & Networking နယ်ပယ်သို့ စတင်ဝင်ရောက်လိုသူများနှင့် advanced level အတန်းများသို့ ဆက်လက်တက်ရောက်လိုသူများအတွက် မြန်မာနိုင်ငံ တွင် ပထမဦးဆုံးအနေဖြင်. ဖွင်.လှစ်သော telecom နယ်ပယ်ပိုင်းတွင်သိသင့် သိထိုက်သော ဘာသာရပ်များကိုတစ်စု တစ်စည်းတည်း သင်ကြားလေ့လာနိုင်သော အတန်းဖြစ်သည်။.
Level2Certificate in Telecommunication
Advance Mobile communicaiton technologies
Advance Data communicaiton technologies
Advance Optical fiber network technologies
ယခုအတန်းတွင် Level 1 Certificate in Telecommunication အောင်မြင်ပြီးသူများ နှင့် Senior Telecommunication Engineer အဖြစ် လုပ်ငန်းခွင် အတွင်း ၀င်ရောက်လုပ်ကိုင်သူများအတွက် အဓိက ရည်ရွယ်၍ ဖွင့်လှစ်ထားသော အတန်းဖြစ်သောကြောင့် ဘာသာရပ်တစ်ခုစီ ကို Technical အပိုင်း လေးလေးနက်နက် အသေးစိတ် သင်ကြားပေးမည် ဖြစ်သည်။
Level3Certificate in Telecommunication [telecom management]
Personal Management (15 hours)
Telecom Engineering Course (35 hours)
Telecommunication technologies and solutions
Telecom Installation & Commissioning, quality audit
HEALTH AND SAFETY ON TELECOM SITE/HSE PRINCIPLES
HSE requirements on working place
Equipment and Tools safety
HSE requirements : Environment
မြန်မာနိုင်ငံ၏ Telecom Company များရှိInternational အဆင့် ဆက်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီများသို့ လက်တွေ့ လုပ်ငန်းခွင်ဝင်ရောက်နိုင်ရန်နှင့် Telecom Engineer ကောင်း အဖြစ်ရပ်တည်ချင်လိုသူများအတွက် ရည်ရွယ်၍ ဖွင့်လှစ်သောအတန်းဖြစ်သည်။သင်တန်းပြီးဆုံးပါကTelecom Engineering Training နှင့် HSE(Health, Safety and Environmental) သင်တန်းဆင်းလက်မှတ်နှစ်ခုလုံးချီးမြှင့်မည်ဖြစ်ပါသည်။
Telecom Business တည်ထောင်လိုသူများအတွက် ရှိသင့်ရှိထိုက်သော Ethical knowledge များကို Telecom Field Engineer လောကတွင် နှစ်(30) နီးပါးရှိသောခရိုအေးရှားနိုင်ငံသား Mr Mickey မှ စာတွေ.လက်တွေ. အသေးစိတ် သင်ယူရမည် ဖြစ်ပါသည်။
တစ်ဦးချင်း ကျွမ်းကျင်စွာနားလည် တတ်မြောက်သည် အထိသင်ယူရမည် ဖြစ်သည်။
Mickey မှ International Teaching Style ဖြင့် သင်ကြားပို.ချသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
MTG မှ Certificate ချီးမြှင်.မည် ဖြစ်ပါသည်။
Skillful Telecom Engineer တစ်ဦးအဖြစ် လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း ၀င်ရောက်နိုင်မည် ဖြစ်သည်။
Telecom Company များတွင်အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းရှာဖွေရာတွင် အခမဲ့ ကူညီဆောင်ရွက်ပေးမည် ဖြစ်ပါသည်။
ကိုယ်ပိုင် Telecom Business တည်ထောင်လိုချင်သူများအတွက် လိုအပ်သောအထောက်အပံ့များကိုကူညီဆွေးနွေးပေးသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
ကိုယ်ပိုင် Telecom Business လုပ်ငန်းရှင်များအတွက် လိုအပ်သော Personal Management Skills များတိုးတက်ကောင်းမွန်လာပြီးလက်တွေ. လုပ်ငန်းခွင်တွင် ထိရောက်စွာအသုံးချနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။
ယခုချိန်ထိ Telecom Field တွင် သင်တန်းသားအယောက်(30)ကျော်ကိုအလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများရှာဖွေပေးနိုင်ခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် မြန်မာနိုင်ငံရှိနာမည်ကြီး Job Agency များနှင့်လဲချိတ်ဆက်ပေးထားပါသည်။.
Room No 407,4th Floor Hledan Center
Kamryut Township,Yangon,Myanmar Phone:+95 9678000071, +95 9678000072
No 69,4th Floor,Myaynigone Zay Street
(Corner of Ma Po Street),Sanchaung Tsp, Yangon, Myanmar Phone:+95 (0) 9404009334,+95 (0) 97 6992 6161 Email: info@myanmartg.com.mm
MTG Company Limited isaTelecommunications and Information Technology (IT) services and solutions based company in Myanmar.
The company also provides solutions for other verticals such as Government, Manufacturing, Retail, Distribution, and Telecom industry.